हामी हामी कसरी धर्मी साबित गर्न लड्न, धार्मिक येशू लागि आउनुभएका छन् कि भूल. मत्ती 9:13
तपाईं यूनिभर्स परमेश्वर अस्वीकार? यसलाई विश्वास गर या नगर, यो हामी सबै सोच्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो. It’s clear in Scripture that eternal life is freely...
मसीहीहरूको लागि, प्रश्न छ छैन हामी प्रलोभनको सामना गर्नेछ वा छैन, तर हामी प्रतिक्रिया हामी कसरी त्यसो गर्दा गर्नेछ. लूका मा 4:1-2, we read about the temptation of Jesus and how...
वा कुनै पनि मसीहीहरूलाई - - त्यहाँ नयाँ मसीहीहरूले सुनेपछि जस्तै अप येशूको लागि मेरो हृदयमा स्नेह जगाउन केही कुराहरू छन् बप्तिस्मा मार्फत आफ्नो विश्वासको सार्वजनिक पेशों बनाउन. I think of...
कसरी परमेश्वरको दृष्टि मा हामी धर्मी हुनुहुन्छ?
कसरी परमेश्वरको दृष्टि मा हामी धर्मी छौं? यो ख्रीष्टको पापी थियो जसमा एउटै आदर मा assuredly छ. उहाँले एक तरिका हाम्रो ठाउँमा ग्रहण लागि, that he might...